Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Demarai Gray Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha ya "Gray". Ụmụaka anyị Demarai Grey Akụkọ ọzọ na enweghị akụkọ ndụ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nchoputa ahu bu ihe ndi ozo na ndu ya, ndu ndi ozo, akuko nke ozo tutu ama aha, bilite na akuko akuko, nmekorita na ndu onwe ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọganihu ya, dribbling na Usoro nke mere ya otu n'ime ndị na-agba ọsọ football egwuregwu na England. Otú ọ dị, naanị mmadụ ole na ole na-atụle Demarai Gray's Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Demarai Gray Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
A mụrụ Demarai Remelle Grey na Ụbọchị 28th nke June 1996 ka Birmingham, United Kingdom. Grey sitere na ya Jamaica na-ekele ndị mụrụ ya bụ ndị nwere kpọmkwem Jamaica mgbọrọgwụ. Nke a pụtara na ọ dịka n'oge ederede ka ọ ruru eru igwu maka Jamaica.
Demarai Gray si n'agbata ụlọ dị n'etiti n'etiti ụmụ amaala ndị Jamaica nke Britain nke dị iche na nke ndị ibe Jamaica Jamaica dị ka; Daniel Sturridge, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain, Raheem Sterling, Kyle Walker, Danny Rose na Chris Smalling.
Nwanna nwanyị Grey - Ebe E Si Nweta Twitter
N'ịbụ onye na-eto eto na nwanne ya nwanyị, Gray gara Frankley High School ebe ọ malitere ịkụ bọl nke asọmpi nke ọ gbasara mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ. Ihe omume ntụrụndụ mbụ na-akwụ ụgwọ dị iche iche ka ọ na-eduga n'ọrụ.
Demarai Gray Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ Ndụ Mmalite
Tupu oge ya na Frankley High School, Demarai Gray malitere igwu egwu ya na ìgwè ndị ntorobịa nke obodo ya, bụ ndị otu agbụrụ nke Cadbury Athletic. Ọ na-eche echiche na ụlọ ọrụ ahụ nke mere ka ọ merie ohere mmụta na Birmingham Academy.
Gray sonyeere ụlọ akwụkwọ mmuta nke Bad dịka onye n'okpuru 11. N'okpuru ebe a, o zutere ma ghọọ enyi Nathan Redmond onye ọ na-elebu anya dị ka ihe kachasị emetụta ọganihu ọ na-eto eto.
Mmekọrịta Demarai Gray na enyi Nathan Redmond. Ebe E Si Nweta Pinterest na Birmingham Post.
Demarai Gray Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ụzọ Ebube
Na gọọmenti, Grey na-enwe obi ụtọ ma na-enwe obi ụtọ nọgidere na-agụ akwụkwọ football ruo 2012. Ọrụ ya n'oge ọzọ (2013-2014) nyere ya ụlọ ọrụ Academy Player nke Oge Oge.
Ụzọ nke Demarai Gray (Ebe E Si Nweta BBC)
Oge ahụ hụkwara Gray ka ọ bụrụ nkwalite ọkwá mbụ nke Birmingham ebe ọ malitere ịsọ mpi ịghọ onye na-amalite mgbe niile.
Demarai Gray Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Bilie na-ewu ewu
Mgbe ha nọ na mbụ Birmingham, Gray malitere ịsọ asọ maka ọrụ mbụ nke otu onye na-ajụbu Federico Macheda. Ọ bụ asọmpi siri ike nke hụrụ Gray ka ọ na-apụ ma na-eme ka Macheda hapụ ụlọ ọrụ ahụ.
Nke a bụ oge oge ụlọ ọrụ Birmingham nwere nkwenkwe ọ na-egosi na ọ tozuru okè. Gray mebiri oge na-esonụ 2014-2015 nke hụrụ ya na-emeri atọ trophies bụ; Onye Na-eto Eto Njikọ nke Football na ọnwa Disemba 2014, Birmingham City Goal na ọkpụkpọ nke Oge 2014-2015.
Achọghị ka Gris na-agwụcha na ikike ịkwadochite ọnụ ya site na nke mbụ Njikọ Ndị Nlekọta Na-ahụ Maka Ngwá Agha nke Leicester City bụ onye megharịrị iwu nke ntọhapụ ya. Gray sonyeere ndị Njikọ ahụ na 4th nke January 2016 ma nye aka ndị otu ya na ịchọta okpueze nke Njikọ.
Demarai Gray na-eso ndị na-ejide ya na Premier (Ebe E Si Nweta PremierLeague)
Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu bụ akụkọ ihe mere eme.
Demarai Gray Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ mmekọrịta
Ònye bụ Demarai Gray Dating?
Nwunye Enyi Demarai Grey- Eziokwu Na-ezighị Ezi (Ebe E Si Nweta Ntuzi)
Ihe ndị a na-ezoro ezo nke Grey bụ otu nke na-ahapụ nyocha nke ọha mmadụ nanị n'ihi na ndụ ịhụnanya ya dị nnọọ iche na ikekwe n'efu. Grey dị ka oge ederede kpebiri na ọ gaghị eme ka ọha na eze mara ihe ọ bụla gbasara ndụ ya.
Enye ama enen̄ede ama ọbọrọ mbụme emi ọbọrọde mbụme oro enye ekenyenede. N'okpuru ebe a bụ nnọkọ nyochaa.
Demarai Gray Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Eziokwu efu
Ụbọchị Demarai Grey Chepụtara ọnwụ:
Ị maara?… Demarai Gray na-aghọ aghụghọ mgbe ọ nwụsịrị mgbe ọ gbanyechara ụkwụ na helikopta na njem na Leicester City PA Awards.
Ụbọchị Demarai Gray's Cheated Death (Ebe E Si Nweta FameFlynet.uk.com)
N'ihi ike nke ifufe ikuku, a na-adọrọ British Jamaica ka ọ fọrọ nke nta ka ọ banye n'ime ọdụ ụgbọ oloko helikopta. Mgbatị ọsọ ọsọ nke onye ọrụ Helicopter nyere aka gbochie ihe mberede. Lelee ihe vidiyo ahụ.
Ọ nabatara akwụkwọ ọjọọ Lethal Hippy:
Ihe merenụ mere mgbe Leicester na-emeri ndị na-aga agha na Everton. Ọ bụ oge Birmingham mụrụ ụmụ amaala na-ekpuchi onwe ya na-emetụta ihe dị egwu 'nitrous oxide', nke a maara dịka 'na-agba ọsọ'.
Ihe nkiri Demarai Gray na-etinye aka na Hippy Crack (Ebe E Si Nweta na mirror)
Grey mgbe ị na-ekpuchi ihe ahụ kpebisiri ike ịdebe vidiyo ahụ na-eme mkpesa na Snapchat ya.
Ọ bụ ezie na, ọ bụ iwu ka ị nweta elu ma ndị ụlọ ọgwụ na-agwọ ọgwụ ọjọọ na-adọ aka ná ntị na ịmịnye gas na-efunahụ ụbụrụ nke ikuku oxygen ma nwee ike igbu.
A Prank Egburu:
Demarai Gray Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- LifeStyle
Ịmata ụdị ndụ Demarai Gray na-adị na ya na-enye aka n'ịmepụta ya zuru ezu.
Dị ka mirror, Onye mmeri mbụ nke Demarai Gray mere ememme Premier ya na nwa Lambo.
Ọ bụghị ụdị ndị na-eto eto na-ebi ndụ na Lavish Web dị mfe na-ahụ anya site na ole na ole nke mara mma ụgbọala na duplexes.
Demarai Gray Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ nke Onye
Ọ bụ ezie na ị ghaghị ịgụworị banyere mmejọ ya na-agbawapụ na ihe ndapụta nchedo helikopta. Mana ịmara ụdị ndụ Demarai Gray ga - enyere gị aka ịchọta ya n'ụzọ zuru ezu. Tupu anyị aga n'ihu, ka s jụọ ajụjụ ahụ.
Ụdị ụdị dị iche iche na-abata n'uche gị mgbe ị na-eche banyere ndị ọkachamara nke oge a?
Ị nwere ike iche echiche banyere àgwà ọjọọ. Ma Demarai Gray bụ onye nwere obi ọmịiko nke hụrụ ego itinye ego na oge ya aka ka ọ bụrụ ebe ka mma.
Ụdị Demarai Gray (Ebe E Si Nweta Instagram)
Grey na-etinye aka na ọrụ ebere. Ọ nọ n'etiti ndị na-eburu ego maka ụlọ ọgwụ na ụmụaka iji hụ ndị ọrịa. Ọ bụ naanị oge tupu ọ bịa otu onye nnọchiteanya UNICEF UK.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Demarai Gray Child Akụkọ nke a na-agbakwụnyeghi eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Bọchị agbanweela: Septemba 27, 2020
Bọchị gbanwee: Mee 25, 2020
Bọchị agbanweela: Septemba 24, 2020